Haddii aad tahay qof user Windows ah, Windows Media Player shisheeye ah si aad u ma noqon doonto. Waa Window ee media player defaulted kaas oo sidoo kale bixisaa xarunta ay gubaan CD-yada iyo DVD-yada macluumaadka aad gubi drive DVD. Nasiib darro, fursad u gubi DVD video ah oo aan la heli karin, taas oo macnaheedu yahay ma waxaad gubi karo DVD inuu u ciyaaro aad DVD ciyaaryahan guriga la Windows Media Player.
Qaybta 1aad: Sida loo Guba Windows Media Player files si DVD ah Video
Qeybta 2: Sida loo Guba Data DVD la Windows Media Player
Qeybta 3: Waa maxay faraqa u dhexeeya DVD Data ah iyo DVD ah Video
Qeybta 4: Sida loo Play DVDs la Windows Media Player
Halkan waxaan ku tusi doonaa sida loo badalo Windows Media Player files si qaab DVD video ah oo markaas iyaga gubi in disc DVD la software hal ah; Wondershare ka DVD Creator ( DVD Creator for Mac ). Waa sida ugu fudud ee 1-2-3 si ay u gubaan DVD video ka Windows Media Player files. Waxaad u baahan doontaa in aad kala soo bixi version maxkamadda iyo rakibi si aad u computer hore.
Tallaabada 1. Load Windows Media Player videos in ay gubi DVD ah
Ka dib markii DVD Creator la geliyo ee your computer, waxaa lagu daahfuri oo aad arki doonaa suuqa kala aasaasiga ah sida hoos ku qoran. Guji ka Import button ku darto Windows Media Player files gal barnaamijka. Haddii kale, jiididda-iyo-hoos u dhac toos ah interface ka videos. Ayaad ugu dari kartaa, tirtirto ama abaabuli daray Windows Media Player files in ay ku saxaarad item ee uu dhinaca bidix ee interface ka. Ka sokow videos gubanaya si DVD disc ah playable, barnaamijka ayaa sidoo kale aad u saamaxaaya in ay sameeyaan DVD slideshow ah oo aad ururinta photos iyo music.
Tallaabada 2. Edit videos iyo duubey
Dhammaan qalabka tafatirka caadiga ah waxaa lagu bixiyaa si kor videos. Haddii photos waa la isku keeno, waxay ku soo dhisi doono slideshow sawir si toos ah. Labada leedahay Edit icon soo socda horyaalka. Waxaa Riix in la furo suuqa kala tafatir ah ee video ama slideshow ah.
Tallaabada 3. Start gubanaya Windows Media Player DVD disc
Tani software gubi DVD kaa caawinaysaa in aad si aad u DVD video in uu dhameystirtay la menu ah. Si fudud u dooran menu ah oo astaysto la background image ah, music iyo dhawr fursadood oo kale. Marka aad ku qanacsan filimka, guji ee Gubashada badhanka si ay u gubaan DVD-off Windows Media Player. Waxaa xadaynta ku saabsan noocyada disc DVD ma ahan ilaa iyo inta aad DVD gubi iyaga taageertaa, oo ay ku jiraan DVD + R, DVD + RW, DVD-R, cajalladaha DVD double-shka-DVD RW iyo.
Haddii aad rabto in aad ku qori Windows Media Player files si DVD ama CD kaydinta ujeedada; si fudud Raac tallaabooyinka hoose si aad Windows Media Player 12 in uu ka mid ahaa in Windows 7.
Tallaabada 1 : Run Windows Media Player dhex Start> All Programs> Windows Media Player . Haddii Player Media ay haatan waa uu furan oo aad ku Now Playing hab, riix Switch inay Library button ee geeska sare ee midigta ah ciyaaryahanka.
Talaabada 2 : In maktabadda ciyaaryahanka, tag Gubashada tab. Markaas riix Gubashada Options button ka dibna riix Data CD ama DVD .
Talaabada 3 : Geli disc maran galay aad CD ama DVD gubi. Haddii sanduuq AutoPlay ka hadal u muuqataa, waxa la xiro. Haddii aad computer ayaa in ka badan hal CD ama DVD drive, guji drive aad rabto in aad isticmaasho si ay u gubaan DVD xogta ee ay leeg- navigation ah.
Talaabada 4 : Raadi alaabta maktabadda aad ciyaaryahan ee in aad rabto in aad nuqulka in disc ah. Hadda jiidi waxyaabaha ka faahfaahinta Murayaad in ay leeg- liiska si ay u abuuraan liiska gubashada ah. Waxaad soo jiidi kartaa shayga kor ama hoos liiska si ay u bedesho booska item ee. Haddii aad rabto in aad ka saarto shay ka mid ah liiska gubatay, xaq-riix shayga, ka dibna riix saar ka mid ah liiska.
Talaabada 5 : Marka aad ku qanacsan liiska gubatay, riix Start si ay u gubaan. Waxay qaadan doontaa dhowr daqiiqo si ay u gubaan liiska Windows Media Player files si aad u DVD disc ah.
DVD xogta A waa uun kaydinta Ujeedada halka DVD video ah oo kuu ogolaanaya in aad Radidiyaha iyo daawado waa raalli ciyaaryahan DVD caadiga ah ee TV-ga. The video iyo files audio on DVD xog ah si fudud loo wareejin karaa your computer. Sida DVD video ah, Media Windows ka Player files u baahan tahay in la badaley sida ay faahfaahinta DVD video ee iyo gubay software ah DVD gubanaya la mid ah Wondershare ka DVD Creator ( DVD Creator for Mac ).
Haddii ay DVD xogta ama video ah, oo aad isticmaali karto Windows Media Player si ay u ciyaaro. Dhab ahaantii, disc ka bilaabo si toos ah u ciyaaro. Haddii aanay ama haddii aad jeclaan doonaa inuu u ciyaaro disc ah in horay loo geliyo sameeya; waxaad u baahan doontaa in la furo Windows Media Player ka dibna riix magaca disc ee Murayaad navigation maktabadda ciyaaryahanka ka.
Haddii aadan Radidiyaha kartaa DVD la Windows Media Player, waxaad isku dayi kartaa adiga oo isticmaalaya Media Windows ka Player ee DVD troubleshooter si uu u xaliyo qaar ka mid ah dhibaatooyinka caamka ah sida ku qoran ee soo socda:
Guji ka Start button, ka dibna riix Panel Control .
In sanduuqa raadinta, ku qor troubleshooter, ka dibna riix Dhibaatooyinka .
Guji View All , ka dibna riix Windows Media Player DVD .
Haddii aad heshid fariin ayaa sheegay in in your computer ka maqan codec ama in aad u baahan tahay doonaa DVD decoder ah, isku day in aad ku rakibidda xirmo dhan-in-mid codec sida K-lite codec Pack. Haddii aad qabto wax su'aalo ah oo kale, si xor ah u soo xiriir kooxda Support ee.
> Resource > Windows > Sida loo Guba DVD la Windows Media Player 11,12